Kleva Nkeva - Kulani Sewing Project based in Dubana location Lusikisiki
more from Kleva Nkeva
ISHISHINI ELISAKHULAYO LOKUTHUNGA IIMPAHLA
Ikulani Projects ngukopolotyeni (cooperative) owasungulwa ngonyaka wamawaka amabini anesibhozo (2008) kwilali yaseMcobothini eDubana emva kwaseMqikela high school. Ukopolotyeni lo lishishini elinee nkonzo zokuthungisa iimpahla kwaye baphinde bazithengise. Eli shishini laqalwa ngamanina angamalungu mahlanu (5), amagama abo inguNobelungu Sogobile, Tobeka Nqabeni, Nosiphiwo Sompha, Zandile Mtiki kunye noSphesihle Nqabeni. La manina anesakhono sokuthunga iimpahla, abathi xa besitsho basifundele kwisikolo samabanga aphezulu eNgqungqushe Campus (INGWE TVET COLLEGE).
Emva kwemfundo yabo baye basungula lokopolotyenii ngokweenjongo zokuba baphuhlise isakhono sabo sokuthunga iimpahla, ngenjongo yokufundisa abo banomdla wokuthunga apha ekuhlaleni kwaye nokuzithengisa. Esinye isizathu ibikuthengisa umsebenzi wezandla zabo oquka umakufanwe ezikolweni (uniform), iimpahla zomsebenzi, amajalumane, iipinifa, imiqamelo, iidyasi nokunye okuninzi.
Amalungu alo kopoletyeni abona ukuba mawandwendwele isebe lezo buRhulumente, umasipala waseNgquza Hill, injongo yabo isisicelo sokuncediswa, ngokwakhelwa indlu kunye nezixhobo zokuthunga impahla. Urhulumente weloxesha wathi xa ephendula, mabafune indawo abangasebenzela kuyo. Bakhangela bayifumana indawo kwilali yaseMcobothini eDubana, umasimpala wabancedisa njengangoko wayezibophelele kweliphulo.
Eli lishishini likwazile ukusebenza nezikolo eziquka uMqikela high school, Zanokhanyo S.P.S. iGoso Forest J.S.S. kunye noMxhume High School. Ikulani Project iyawancedisa namashishini akhulayo ngokuwathungela iimpahla zawo zomsebenzi ngamaxabiso afikelelkayo, kwaye bayazithungela neCawa zasekuhlaleni.
Njengangoko bamqala bebahlanu kuphela lokopoletyeni, umnqweno wabo wengomso kukuba bangafumana abanye abantu abanothando lokuthunga, bazokuncedisa ukukhulisa elishishini kwaye nokuncedisa ukunika abantu amathuba emisebenzi.
Elishishini landwendwelwa ngabo basematheni besuka kwiindawo ngeendawo ukuzobona umsebenzi walo kopoletyeni. Umzekelo woku, basibonisa amalaphu etafile abawathengelwa ngusomashishini waseMonti.
La manina athi anqwenela ukuba likhulile nalo elishishini lizokwazi ukuncedisa, ukuvula amathuba emisebenzi nje ngangoko inqongophele kulemihla.
Amalungu eli shishini athe xa ephendula umbuzo wokuba, “Banawo na umnqweno wokuqeqesha abantu abanomdla ukusazi esi sakhono sokuthunga?” Bathi xa be phendula basakhangela iindawo ezinokubancedisa bakwazi ukhupha izatifikethi ngokwasemthethweni. Lento izonceda abafundi abaphuma apha bakwazi usisebenzisa esisakhono nakwiindawo ezingaphandle.
Xa ufuna ukuqonda ngeKulani Project: 083 716 3954/ 083 968 1673
The face of Magwa will be transformed and opportunities kwiNtsangu
Nomawele Njongo writes a tell all book
Rape hearing postponed on defendants request
Lusikisiki Lukhathele Zizidlwenga nababulali abatefiswayo ngumthetho
Meet Lindekile Ndlokolo
SAMSA Maritime Opportunities
180 EC youth get nod
COGTA Investigation IHLM
Provincial leadership out for scalps
Digital Revolution and Capitalism
Contact Kleva Nkeva on:
Located at Dubhana A/A
Copyright © 2016 TechnoDelic (PTY) Ltd. Page designed by Technodelic